TOP 10: Tobanka Saxiix Ee Ugu Waa Weyn Ee La Dhameystiray Ka
Suuqa kala iibsiga xagaaga ayaa sannadkan furmaya bisha Agoosto ama September madaama uu saameyn ku yeeshay fayraska safmarka ah ee Korona.
Suuqa kala iibsiga ayay aheyd inuu furmo bisha July ee soo socota laakiin madaama xilli ciyaareedyada horyaalada Yurub ay weli socdaan islamarkaana Champions League iyo Europa League la ciyaarayo bisha Agoosto, waxaa la go’aamiyay in suuqa kala iibsiga uu si rasmi ah u bilowdo bisha September.
Laakiin horyaalada qaar ayaa qorsheynaya inuu suuqooda uu furmo isla bisha Agoosto iyadoo la isku raacsan yahay in suuqa xagaaga la soo xiro 4ta ama 5ta bisha October.
Hadaba waxaa jira heshiisyo la dhameystiray ka hor inta uusan suuqa kala iibsiga furmin, waxaana eegi doonaa saxiixyada ugu waa weyn ee ilaa iyo haatan la dhameystiray horyaalada Yurub.
1- Arthur Melo (Barcelona -> Juventus)- Xiddiga khadka dhexe ee Barcelonal ayaa ku biiraya xilli ciyaareedka soo socda kooxda Juventus oo ku iibsatay 72 milyan euro.
2- Miralem Pjanic (Juventus -> Barcelona) – Barcelona ayaa iyadana dhankeeda la soo wareegtay waayo araga khadka dhexe ee Juventus Pjanic oo ay ka soo bixiyeen 60 milyan euro
3- Timo Werner (RB Leipzig -> Chelsea) – Chelsea ayaa saxiixyo waa weyn sii sameysay xagaagan iyagoo durbaba 52 milyan ginni kula soo wareegay weeraryahanka Jarmalka Timo Werner oo ay ka dulqaadeen Liverpool.
4- Hakin Ziyech (Ajax -> Chelsea) – Saxiixii ugu horeysay ee uu sameeyo tababare Lampard waxa uu ahaa xiddiga khadka dhexe ee Ajax kaasoo 40 milyan euro ku imaanaya xilli ciyaareedka cusub kooxda Blues.
5 – Thomas Meunier (PSG -Dortmund) – Kooxda Jarmalka ee Borussia Dortmund ayaa si xor ah kula wareegtay daafaca midig ee PSG oo baadigoobayeen kooxaha waa weyn ee Premier League.
6 – Morgan Schnierderlin (Everton – Nice) – Xiddiga khadka dhexe ee Everton ayaa lacag yar oo gaareysa 2 milyan ginni ugu wareegay kooxda Faransiiska ee Nice.
7 – Mauro Icardi (Inter Milan -> PSG) Kooxda Faransiiska oo amaah ku heysatay xiddiga reer Argentina ayaa heshiis joogta ah oo gaaraya 45 milyan ginni kula wareegtay.
8 – Emre Can (Juventus – Borussia Dortmund) – Kooxda Jarmalka ayaa heshiis joogta ah u bedeshay amaahdii ay ku heysatay xiddiga khadka dhexe ee Jarmalka.
9 – Alvaro Morata (Chelsea -> Atletico Madrid) – Heshiiskii amaada ee uu Alvaro Morata ku joogay Atletico Madrid ayaa loo bedelay mid joogta ah xagaagan iyadoo Chelsea ay heleyso 50.4 milyan ginni.
10 – Giovani Lo Celso (Real Betis -> Tottenham) – Spurs ayaa si joogta ah kula wareegtay xiddigii ay amaahda ku heysteen ee Lo Celso iyagoo ku iibsaday 28.8 milyan ginni.
axadle 3213 posts